फेसबुक म्यासेन्जरमा थपिएको इन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्सन के हो ? - Abhiyan news
फेसबुक म्यासेन्जरमा थपिएको इन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्सन के हो ?
३१ श्रावण २०७८, आईतवार ०३:०४ अभियान न्यूजLeaveaComment on फेसबुक म्यासेन्जरमा थपिएको इन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्सन के हो ?
फेसबुकले आफ्नो लोकिप्रय च्याट एप म्यासेन्जरमा भ्वाइस र भिडियो कलका लागि इन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्सन फिचर थप गरेको छ । कम्पनीले शुक्रबार एक ब्लग पोस्ट गर्दै यस्तो सुरक्षा फिचर थप गरेको जानकारी दिएको हो । साथै सोही अवसर पारी कम्पनीले ‘सेक्रेट कन्भर्सेसन‘ अप्सनका लागि पनि नयाँ अपडेट जारी गरेको छ । यी फिचरले फेसबुक म्यासेन्जरलाई थप सुरक्षित बनाउने कम्पनीको विश्वास छ ।
फेसबुक मेसेन्जरले २०१६ मा ‘सेक्रेट कन्भर्सेसन’ अप्सन थप गर्दै पहिलोपटक टेक्स्ट म्यासेजका लागि इन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्सन सुरु गरेको थियो । टेक्स्ट म्यासेजसँगै भ्वाइस र भिडियो कलमा प्रयोगकर्ताको रुचि बढ्दै गएकाले यो फिचर विस्तार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
सुरूवातमा यो फिचर केही प्रयोगकर्ताका लागि मात्र उपलब्ध गराइएको छ । चाँडै नै सबैका लागि इन्ड-टु-इन्ड इन्क्रिप्सन फिचर खुला गरिने कम्पनीले जनाएको छ । यो फिचर प्रयोगमा आएसँगै म्यासेन्जरमा हुने कल तेस्रो व्यक्तिले सुन्न सक्दैन । अर्थात् दुई डिभाइसबाट म्यासेन्जरमा हुने कलमा तेस्राे पक्षले पहुँच राख्न सक्दैन ।
अफगानिस्तान सरकारले तालिबानलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार
फेसबुकको नाम परिवर्तन गर्ने तयारी, के रहला त अव नयाँ नाम ?
३ कार्तिक २०७८, बुधबार १५:३४ अभियान न्यूज
हाँस्य ब्यङ्ग्य कलाकार रमेश केसीको निधन
३ आश्विन २०७८, आईतवार १०:३१ अभियान न्यूज